Jebinta Caqabadaha Badbaadinta Maaliyadeed
Diyaargaroobi iyo Sharciga
Stephanie wuxuu ahaa macaamil dhiirranaan ah Diyaargarow + Prosper (P + P) muddo afar sano ah. Waxay markii hore ka bartay hay'adda adoo wacaya United Way 2-1-1. Sida kaaliyaha macalinka iyo hooyada kelidood, Stephanie wax badan ayey ku leedahay taatikeeda iyo waqtiga canshuurtu waxay ka caawisaa inay ka dhigto mid la maareyn karo. Caawin lacag la'aan ah oo khibrad u leh canshuuraha iyo dhaqaalaha - iyo canshuur celinta ay soo celiso - waxay muhiim u tahay guusheeda joogtada ah ee qoyskeeda.
"Canshuurtayda dib-u-soo-celinteyda waxay ka dhigeysaa isbedelka aniga iyo qoyskeyga," ayuu yiri Stephanie. "Sababtoo ah canshuurta canshuurta sida Dakhliga Cashuurta Dakhliga" Earned Income Tax Credit ", waxaan awooday inaan deynta iga bixiyo iyo inaan badbaadiyo. Anigu waxaan ahayn baabuur muddo sannad ah. Ka dib markii aan bixiyay dayactirka waxaan awoodey inaan dhisto kayd degdeg ah si aan iiga caawiyo cimilada waqtiga soo socda sida wax u dhacaan. "
Tabaruciinta Prepare iyo Prosper, oo ah deeq bixiye Gobolka & McKnight, ayaa helay canshuurta canshuurta iyada oon ogayn inay u qalantay - sida K-12 Waxbarashada Minnesota K-12. Iyadoo la adeegsanayo gargaarka P + P, Stephanie maaha oo kaliya waxbadan oo ku saabsan ku soo noqoshada canshuur celinta waxayna kalsooni ku qabtaa xaqiiqda ah inay kordhiso lacagteeda, laakiin waxay bilowday inay dhisato mustaqbal dhaqaale.
Marka Stephanie uu markii ugu horeysay yimid canshuurtii ay qaadatay afar sano ka hor, waxay furatay koontada kaydka iyada oo loo marayo wadaageka P + P ee US Federal Credit Union si ay u taageeraan kaydinteeda, waxayna sidoo kale hubisay warbixinteeda deynta. Taasi waxay keentay faham wanaagsan oo ku saabsan deynta ardayga iyo qorshe cusub oo lacag bixin ah oo ugu dambeyntii keenay iyada deynta. Sanadka 2014, waxay ka faa'iideysatay barnaamijka tababarka dhaqaale ee cusub ee ururka kaas oo loogu talagalay in lagu caawiyo shaqsiyaadka riyooyinkooda dhaqaale.
Markii la waydiiyay sida P + P ay u sameysay isbedel nolosheeda, waxay ka hadashaa qoyskeeda. "Ma ahan oo kaliya inaan awood u yeeshay in aan mustaqbal wanaagsan u helo carruurteyda," ayuu yiri Stephanie. "Laakiin waxaan awooday inaan baro oo muujiyo wiilkayga da'da yar qiimaha badbaadinta, iyo in lacag yar laga dhigo wax yar ma kordhiyo." Labada Stephanie iyo wiilkeeduba waxay hadda badbaadinayaan waxbarashada jaamacadeed.